7 Gbanyụọ ụzọ Beaten na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > 7 Gbanyụọ ụzọ Beaten na Europe
Train Travel Austria, Ingbọ oloko na Belgium, Train Travel Czech Republic, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Train Travel Holland, Inzọ Njem Italytali, Train Travel Switzerland, Train Travel The Netherlands, Travel Europe
Inggagharị na ịchọpụta ebe ndị ọhụrụ na-enye anyị nku nrọ, amaja, ma mụta. N'ụwa zuru oke n'ụwa a, ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume ịhụ ihe niile, ọ gaghịkwa ekwe omume ịnụ na ịnụ ụtọ ebe niile na Europe. Na ọtụtụ ebe na-atọ ụtọ, can nwere ike ị rọrọ n ’echiche ịchọpụta ha niile. Ọ bụrụ n’ezie na-achọ ịnụ ụtọ dịka mpaghara ma mepee ụzọ ụzọ ọhụụ, mgbe ahụ anyị nwere 7 njem pụrụ iche ị ga - achọ ị ga - achọpụta.
Site na France rue Switzerland, 7 tụrụ agwa okike, ọdọ mmiri ndị dị jụụ, ụlọ a ma ama na-echere iji bụrụ akụkụ nke foto foto gị nke ezumike ndị kwesịrị ncheta na Europe. Ya mere, jikere ma kwado i buru naanị ncheta na akụkọ, ka ị na-abanye na njem ọhụụ, ma mee ka ụzọ ndị a na-agabeghị.
1. Gbanyụọ ụzọ Beaten: Occitanie, France
Oke Osimiri Mediterenian na oke Pyrenees gbara ya gburugburu, mpaghara South Occitanie na France dị egwu. Home ka ochie obodo, Toulouse ebube, osimiri, na wine, Ógbè France a bụ ihe na-adọrọ mmasị ma dị egwu site na-aga n'ụzọ a na-akụ na Europe iji tinye elu na listi gị.
Occitanie dị iche na French Riviera na Paris, N'ihi nwayọ nwayọ na nrọ ya. N'ihi ya, could nwere ike iwepụta oge gị iji nyochaa obodo Cathar na nnukwu ụlọ ya, tinyere nnukwu Carcassonne dị egwu. Ọ bụrụ na ị hụrụ n’anya n’ọrụ dị iche iche dịka ịnwe mkpagharị ma ọ bụ ịnya, mgbe ahụ Gorges du Tarn canyon na Cevennes National Park dị mma. The National park bụ ihe nchekwa UNESCO biosphere, yana otu n’ime ogige ntụrụndụ iri nke France.
Nwere ike ịme ntọala gị n'isi obodo pink na ịma mma, Toulouse, ma ọ bụ obodo ọma nke Albi. Ha abụọ bụ ihe ịtụnanya maka ụzọ a kụrụ aka imebi obodo na France na ogologo njem na Ememe French. Nwere ike iru Toulouse mfe ma nwee nkasi obi site na njem ụgbọ oloko site na Paris na Barcelona n'ihe dị ka 5 awa.
Lyon na Toulouse site na Ọzụzụ
Paris to Toulouse by Ọzụzụ
Nnọọ na Toulouse site Train
Bordeaux na Toulouse nke Ọzụzụ
Obodo Hallstatt bụ obodo zuru oke nke eserese dị na Lake Hallstatt. Na oge opupu ihe ubi, ịda, ma ọ bụ n’oge oyi, ọ bụ paradaịs zuru oke n’oge ọ bụla n'afọ, na-enye ọtụtụ ihe a na-eme n'èzí maka ndị njem na-anụ ọkụ n'obi nke adrenaline. Ma ọ bụ na ntụle, ọ bụrụ na ị na-arọ nrọ ị aụ mmanya site n'osimiri na iko mmanya ma ọ bụ n'ụgbọ mmiri gburugburu ọdọ mmiri, Hallstatt bu ezigbo ebe njedebe.
Nke a ọmarịcha ebe mere ya ka anyị 7 gbanyụọ ụzọ ebumnuche ndị dị na Europe site na ọgba ndị dị ike, ọdọ mmiri na-acha anụnụ anụnụ, ndagwurugwu Ec elo na ya pụtara echiche na ụzọ ụkwụ. Ghara ikwu, na ọchọpụtala ụwa ndị ọzọ.
Hallstatt bụ 3 awa iji anya site na Vienna site na njem ụgbọ oloko. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ ezumike echefuru echefu na ala Austria na-adọrọ adọrọ, na ọtụtụ ihe pụọ n’ebe ìgwè mmadụ nọ, na Hallstatt bu ihe zuru oke na njedebe ebe uzo esi apu.
Mịnịsta na-akụ site na Train
Innsbruck gaa Hallstatt nke Ọzụzụ
Passau na Hallstatt nke Ọzụzụ
Rosenheim si na Trastatt nke Train
3. Gbanyụọ ụzọ Beaten: Haarlem, Mba netherland
Amachaghị nke ndị agbata obi ya Amsterdam na Rotterdam, Haarlem bụ ihe kachasị mma na mpaghara a kụrụ na Netherlands. naanị 18 Nkeji oge ịpụ site na ụgbọ oloko na Amsterdam, Mma nke Haarlem ga-ejide gị oge ọbụlagodi izu ụka.
Ihe nketa obodo ahụ, nkpuru obi di ndu na ikuku, mepụta ikuku dị ịtụnanya. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịnwe Holland dịka ezi Dutch, jegharịa n'okporo ụzọ ya dị warara, ruo na Grote Markt. mgbe, rugo igwe ikuku, Ihe igwe Adriaan, maka ọhụụ dị egwu banyere obodo na osimiri.
Another great way to spend your vacation in Haarlem is to visit the oldest breweries. Banye 1620, Ebe ahụ 100 ebe omume biya, ma taa ị ka nwere ike ị tasteụ ụfọdụ n’ime Ezi ntụziaka ochie. Ọ ka mma, mgbe nleta gara na otu n'ime ọtụtụ ebe ngosi ihe mgbe ochie n’obodo ahụ, ma enwere ọzọ ngosi ihe mgbe ochie na Haarlem karịa n'obodo Dutch ọ bụla ọzọ.
ikwubi, a bụ obodo a na-akụ akụ obodo ihe zoro ezo n'ime obodo ndị kachasị mma na Europe na ọ bara uru nleta!
4. Ọdọ Mmiri Orta, Italy
Ọtụtụ ndị njem na-aga Italytali nụrụ ụtọ Italian nri ma kporie ndụ obere agụụ, dị ka ndị obodo na-eme. Otú ọ dị, enwere ihe ka ndị Italy karịa iko mmanya jiri pasta emee ya. Ọdọ Orta dị na mpaghara ọdọ mmiri bụ ebe dị egwu na ebe ihunanya. Zoro ezo n'etiti ugwu, ma kewapụrụ na ama ama Maggiore ama ama site n'aka Monte Mottarone, Ọdọ Lake Orta kwesịrị ka ịsọpụrụ gị zuru oke, na oge ichere Italytali na-esoghị ụzọ egwu ndụ ya na ụzọ ndụ iru ala.
site hiking ụzọ ụkwụ, ụgbọ mmiri agafe, mmanya n'akụkụ ọdọ mmiri, na igwu mmiri, Lake Orta bụ ọmarịcha Italiantali mara mma, nke ndị njem nleta achọpụtala.
Lake Orta bụ ụgbọ oloko eji awa abụọ site na Milan, na 5 awa site na Zurich site na nlele nke Alps.
Genoa si Milan site na Ọzụzụ
Rome na Milan site Train
Bologna na Milan site na Ọzụzụ
Florence na Milan nke Ọzụzụ
5. Gbanyụọ ụzọ Beaten: Bohemia, Czech Republic
Nanị awa ole na ole pụọ na Prague na-eme mkpọtụ, ala nke akụkọ mgbe ochie na odida ala na-echere. Ogige ntụrụndụ mba nke Bohemian Switzerland, Czech Svycarsko National Park, dị na ókèala nke Germany. Pravcicka Brana, usoro ihe omimi di egwu, mmiri iyi, na ọtụtụ ụzọ njem, bụ njem ụgbọ oloko dị mkpirikpi na Decin, obodo kacha nso.
Ebe nchekwa ọzọ dị egwu n’èzí bụ Kladska Nature idobere. There’s a beautiful trail to the lake, ọ bụkwa ihe ịtụnanya na ọdịda. ma, ma ọ bụrụ na ị na-ahọrọ obere obodo na chateaux, mgbe ahụ ị ga-ahụ Neo-Gothic n'anya Hluboka Chateau.
Na igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ ụkwụ, Antwerp na-atọ ụtọ ma dịkwa egwu. Obodo nke abụọ kachasị na Belgium, Ndị na-eme njem nleta na-eleghara Antwerp anya. Otú ọ dị, ọ bụ ihe ịtụnanya kwụsịrị amia ụzọ ebe na Europe maka fun ngwụcha izu ụka.
E kee obodo n’otu 3 ebe: ochie obodo, Ndịda, na ọdụ ụgbọ mmiri, ndị bụ ụlọ dị iche iche na ndị mmadụ si n'akụkụ ụwa niile. Ya mere, ọ bụ elu igwe, na-efe ihe ọ bụla obi gị chọrọ. Ngosi ihe mgbe ochie, Nnukwu ahịa, Cathedrals, elu-notch okike mmebe ejiji, dị naanị otu awa site n'isi obodo, ụgbọ okporo ígwè.
Ya mere, ma ọ bụrụ na ị fancy gị onwe gị onwe gị diamond si busiest diamond ahia center, ịhụnanya chọkọleti, na ịzụ ahịa, nke a apụla ụzọ egwu a chọrọ.
Brussels na Antwerp site na Ọzụzụ
Amsterdam ka Antwerp site Train
Lil ga Antwerp site na Ọzụzụ
Paris ruo Antwerp site na Ọzụzụ
7. Gbanyụọ ụzọ Beaten: Lucerne, Switzerland
Ebe zuru oke maka ihunanya ịhụnanya na Switzerland, Lucerne dị ebube. Ije ije n’ọdọ mmiri ahụ, Ihu Ugwu Pilatus na Ugwu Titlis ọnụ ọnụ ugwu snoo na-egosipụta na mmiri, na-enweghị ndị njem nleta gburugburu, nrọ Switzerland.
Ọmarịcha Lucerne ezigbo base njem ụbọchị na Alps, achọpụtabeghị ndị njem. Yabụ ị ga - enweta ohere dị oke ọnụ iji nwee ọ itụ na inyocha Switzerland site n'okporo ụzọ amia. Soro uzo Dragọn a nwalee ike gị na ogige udo, nke abụrụ ihe omume dị mma na-aga gburugburu Lucerne.
Dị n'akụkụ ụkwụ nke Alps dị na ókèala Switzerland na German, Lucerne bụ ihe echefughị ​​echefu ebe ndị Europe na-aga. Lucerne bụ akụ zoro ezo na etiti Switzerland ma ọ bụ jAnyị na-eji ụgbọ elu si n'ọdụ ụgbọ elu Switzerland ebugharị otu awa.
Zurich na Lucerne nke Ọzụzụ
Bern na Lucerne site na Ọzụzụ
Geneva na Lucerne site na Ọzụzụ
Konstanz na Lucerne nke Ọzụzụ
ikwubi, Europe jupụtara n'ihe ịtụnanya, akụkọ mgbe ochie, ihe nzuzo, na ihe ndị njem na-emetụtabeghị. Ọ bụrụ na ịchọrọ inwe ahụmịhe pụrụ iche na mmetụta nke mba ndị kachasị na Europe. Otú ọ dị, ọ bụrụ n’ịchọrọ ije, dị ka ndị obodo na-eme, mgbe ahụ ị nọ n'ime oge dị egwu n'ime ebe njedebe ọ bụla a kpọtụrụ aha n'elu.
ebe a na Save A Train, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka ịchọta tiketi ụgbọ ala kachasị ọnụ na ebe ọ bụla pụrụ iche na ndepụta anyị.
You chọrọ itinye mgbagha blọọgụ anyị “7 Off the Beaten Path Destinations in Europe” na saịtị gị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/off-beaten-path-…tinations-europe/ የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, you will find our most popular train routes – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / ya / fr ma ọ bụ / es na ndị ọzọ asụsụ.
Antwerp citybreakeurope offbeatenpath offthebeatenpath Train Travel traintravelaustria traintravelfrance travelitaly travelswitzerland
Ebe Iji Chọta Left akpa ọnọdụ Na Germany?
Njem ụgbọ oloko, Inzọ Njem Germany, Travel Europe